Uninzi lwabafundi abanqwenela ukuba ngoogqirha bezonyango bahlala bephupha ngokufunda e-Australia. Kungenxa yokuba amayeza ngumsebenzi onomvuzo kwaye iiyunivesithi zaseOstreliya zibonelela ngemfundo yezonyango ekumgangatho wehlabathi. Ke, kweli nqaku, uya kufumana iinkcukacha zeyona yunivesithi zibalaseleyo kwezonyango eOstreliya zabafundi bamanye amazwe.
Uphando lubonisa ukuba icandelo lamayeza e-Australia lifumene igama elihle kwihlabathi liphela. Isizathu kukuba kwizikolo zonyango kweli lizwe kugxininiswa kakhulu kuphando. Oku kubonakala kwimisebenzi yabo emitsha besebenzisa iitekhnoloji ezivelayo.
Ngelixa uqhubeka nemfundo yakho yezonyango e-Australia, uya kufunda kubasebenzi beFakhalthi abaziingcali kwicandelo lezonyango. Ezinye zezi ngcali ziye zafumanisa izinto ezininzi eziqhubeka nokudlala indima ebalulekileyo kwicandelo lezonyango.
Kutheni ufundela amayeza eOstreliya?
Zithini iimfuno zokungenela ukufunda amayeza e-Australia?
Ndingasifaka njani isicelo kwisikolo sezonyango e-Australia?
Ngaba ukufunda amayeza eAustralia kwexabiso eliphantsi?
Ngaba abafundi bamanye amazwe bangasebenza kwizibhedlele zase-Australia njengabasebenzi bezonyango?
Bafumana malini abasebenzi bezempilo e-Australia?
IiYunivesithi zoNyango eziGqwesileyo eOstreliya zaBafundi beZizwe ngezizwe
IYunivesithi yaseNew South Wales (USNW)
KwiYunivesithi yesizwe yaseAustralia
KwiYunivesithi yaseNtshona Koloni
Zininzi izizathu zokuba kutheni abafundi bekhetha i-Australia kwimfundo yabo yezonyango. Ezi zizathu zichazwe ngezantsi.
Amaziko ase-Australia aziwa ngokubonelela ngemfundo ekumgangatho wehlabathi kwicandelo lamayeza. Ngenxa yoko, zihlala zibekwa phakathi kwezona zikolo zibalaseleyo emhlabeni ngokwamanqanaba eMfundo ePhakamileyo kunye nenqanaba leYunivesithi yeQS yeHlabathi.
Ukufunda e-Australia kuya kukunika ithuba lokwenza uphando lwehlabathi. Iiyunivesithi zaseOstreliya ziyayazi le nto njengoko ziye zafumanisa izinto ezininzi kwicandelo lezenzululwazi ngokufumanisa i-penicillin kunye ne-IVF.
Esinye isizathu sokuba ufunde amayeza e-Australia kukuba abafundi bamanye amazwe bavunyelwe ukuba basebenze ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-20 ngeveki ngelixa beqhuba izidanga zabo zonyango. Oku kuyakwenza ukuba bonge imali ukuze bakwazi ukujongana neemfuno zabo.
Ukongeza, banokuthatha ithuba lokufunda i-visa ukuze bahlale kwaye basebenze emva kokuphumelela e-Australia.
Iiyunivesithi zichaza iimfuno zazo kwaye zahlukile enye kwenye. Izidingo zokungena kwiyeza e-Australia ziza kwiindidi ezimbini: isikolo esiphantsi kunye nesiphelo.
Kwiinkqubo zonyango zesidanga sokuqala, iikhrayitheriya ekufuneka zifezekisiwe ngabafakizicelo zibandakanya
Amabanga emfundo. Oku kunokuba yi-ATAR (Inqanaba lokungeniswa ePhakamileyo lase-Australia), IB, okanye iziphumo zeyunivesithi njengeGPA okanye iWAM
I-UCAT (Uvavanyo lweKlinikhi yokuLungela ukuLungela iZonyango)
Amanqaku kudliwanondlebe lonyango okanye kuvavanyo lomlomo.
Kwiinkqubo zonyango ezigqityiweyo:
Abafakizicelo kufuneka bagqibe isidanga esisiseko kwisayensi.
Abagqatswa kufuneka bathathe kwaye badlulise i-GAMSAT (uVavanyo lweeNgcaciso zeZikolo zoNyango lwase-Australia) okanye iMCAT (uVavanyo lweKholeji yoNyango lwezoNyango).
Abafakizicelo kufuneka bayigqibe inkqubo yesidanga se-bachelor kwicandelo elinxulumene nesayensi okanye babe kunyaka wabo wokugqibela kwinkqubo yesidanga sokuqala.
Iiyunivesithi ezibonelela ngamayeza e-Australia zineenkqubo zesicelo ezilungelelanisiweyo. Wonke urhulumente wase-Australia uneziko lokwamkelwa apho abafundi bathumela khona izicelo zabo. Unokukhetha ukufaka isicelo kwiziko lokungeniswa kwelizwe elinye ukuze wandise amathuba akho okufumana ulwamkelo.
Phantse onke amaziko okwamkelwa afuna intlawulo yokwenza isicelo kwaye kufuneka ihlawulwe ngaphambi komhla wokugqibela wesicelo.
Kumaziko okwamkelwa aphakamileyo, uya kubonelela ngeenkcukacha zakho (igama, idilesi, inombolo yomnxeba kunye nedilesi ye-imeyile). Uya kubuzwa kwakhona ukuba ngaba isiNgesi lulwimi lwakho lwesibini kwaye ukuba ungumMi Womthonyama / iTorres Strait Islander.
Iziko lokwamkelwa kumaziko emfundo ephakamileyo liya kufuna ukuba ubonelele ngamabanga akho aphakamileyo kunye / okanye eyunivesithi kunye nenombolo yakho ye-UCAT ANZ. Inombolo ye-UCAT ANZ iya kwenza ukuba amaziko ajonge iziphumo ze-UCAT.
Kwelinye icala, amanye amaziko anokufuna ukuba ungenise isicelo esibhaliweyo. Amaziko afuna isicelo esibhaliweyo abandakanya iYunivesithi yaseJames Cook (JCU) kunye ne-UNSW.
Ukufundela amayeza e-Australia ayisiyondlwana iyanetha ingakumbi ukuba ungumfundi wamazwe aphesheya. Kubafundi bamazwe aphesheya, indleko eziphakathi zokulandela isidanga sezonyango e-Australia nakweyiphi na iiyunivesithi eziphambili, phakathi kwe-255,200 AUD ukuya kwi-630,000 AUD.
Nangona kunjalo, kukho amaziko aphantsi anikezela amayeza e-Australia. Unokubaqwalasela. Amaziko ezonyango aphantsi eAustralia abafundi bamanye amazwe abandakanya iYunivesithi yeSizwe yase-Australia (A $ 56,736), iYunivesithi yaseNtshona Sydney (A $ 67,000), kunye neDyakin University (A $ 69,400).
Ewe. Abafundi bamanye amazwe abaphumelele kwizikolo zonyango zaseOstreliya kwaye bagqibe uqeqesho lwabo banokusebenza njengoogqirha kwizibhedlele zaseAustralia.
Inani lemali elenziwa ngabasebenzi bezempilo e-Australia lixhomekeke kwindawo abahlala kuyo kunye nenani leminyaka abayichithe ebaleni.
Umndilili wezempilo yengqondo yoluntu e-Australia ufumana $82,133 ngonyaka okanye $42.12 ngeyure. Abasebenzi bezempilo abakwinqanaba lokungena benza $68,048 Ngelixa abasebenzi bezempilo abaneminyaka eliqela yamava ebaleni befumana ukuya kuthi ga $104,306 ngonyaka.
Abafundi bamanye amazwe abaphupha ngokufunda amayeza e-Australia banokukhetha nasiphi na kwizikolo zonyango ezidweliswe apha ngezantsi. Ezi zikolo zonyango zibalasele phakathi kwabo bonke ngenxa yedumela labo kunye nenqanaba.
Yiyo loo nto ezona yunivesithi zibalaseleyo kwezonyango zibandakanya:
IYunivesithi yaseMelbourne yiyunivesithi yophando yoluntu eMelbourne, e-Australia eyasekwa ngonyaka ka-1853. IMelbourne yeyona yunivesithi indala eVictoria kunye neyunivesithi yesibini esembindini e-Australia.
I-Faculty of Medicine, iDentistry, kunye neSayensi yezeMpilo kubandakanya izikolo ezininzi apho iSikolo sezoNyango sesinye sazo.
Qho ngonyaka, isikolo sezonyango sifumana izibonelelo kurhulumente zokuxhasa ngezimali uphando kwicandelo lezonyango. Olu phando lwenza iMelbourne ibonelele ngemfundo yezonyango ekumgangatho wehlabathi. Kungenxa yesi sizathu sokuba iMelbourne iza phezulu kuluhlu lwezona yunivesithi zibalaseleyo kwezonyango eOstreliya zabafundi bamanye amazwe.
IYunivesithi yaseSydney (USYD or ISydney Uni) yiyunivesithi yophando yoluntu eSydney, e-Australia eyasekwa ngo-1850. I-USYD yiyunivesithi yokuqala e-Australia kwaye iza kuluhlu lweeyunivesithi eziphambili emhlabeni.
Icandelo lezeMpilo laseSydney Uni lezeMpilo kunye nelezeMpilo libonelela ngezifundo zesidanga sokuqala kunye nezamabanga aphezulu kwicandelo lamayeza. Inkqubo yezamabanga aphantsi eyunivesithi ifumaneka kuphela kwabafundi basekhaya abangama-30 kunye nabali-10 abaphumelele kwisikolo samabanga aphakamileyo.
Le nkqubo yezidanga ithatha iminyaka esixhenxe ukuyigqiba ikhokelela kwiBachelor yoBugcisa kunye noGqirha kwezamayeza okanye iBachelor yeSayensi kunye noGqirha kwezonyango.
Abathweswe izidanga kwisikolo sezonyango i-USYD bafumana ubunkokeli kunye nezakhono zeklinikhi kunye nokuqonda komntu okufunekayo ukudala ifuthe kubomi babantu kunye noluntu.
IYunivesithi yaseMonash yiyunivesithi yophando yoluntu eMelbourne, eVictoria, e-Australia eyasekwa ngonyaka ka-1958. Ineekhampasi ezine eVictoria (Clayton, Caulfield, Peninsula, naseParkville) nenye eMalaysia.
Isikolo seMonash sezoNyango sinesidima sehlabathi sokubonelela ngenkqubo ebanzi neyohlukeneyo yoqeqesho kuqeqesho lwezonyango.
Esi sikolo sonyango lelona ziko laseVictoria elibonelela ngenkqubo yokuNgena ngokuthe ngqo kwabafundi abagqibezela unyaka we-12 kunye neNkqubo yokuNgena kwabaDanga ekhokelela kwinqanaba elifanayo (iBachelor of Medical Science kunye noGqirha Wezonyango).
Isikolo seMonash sezoNyango sibonelela ngemfundo ekumgangatho wehlabathi egxile kukhuseleko kwizigulana kunye nokusebenza ngobuchule. Oku kwenza iMonash School of Medicine yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo kwezonyango eOstreliya zabafundi bamanye amazwe.
IYunivesithi yaseNew South Wales (UNSW or UNSW uSydney) yiyunivesithi yoluntu e-Australia eyasekwa e1949.
I-USNW lelona ziko liphezulu lophando lwefuthe ngokwenza ukuba ibe yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo kwezonyango eOstreliya zabafundi bamanye amazwe.
Iyunivesithi ibonelela ngesidanga sokuqala kunye nokungena kwesiqhelo kwiBachelor of Medical Study / Doctor of Medicine (MD).
Abafundi banikwa izifundo ezijolise kuphando kunye nezandla ekufundeni ngabaphandi abaziwayo kunye neengcali zezempilo.
Eyasungulwa ngo-1909, iYunivesithi yaseQueensland (UQ or IYunivesithi yaseQueenslandYiyunivesithi yophando yoluntu eBrisbane, Queensland, Australia.
IYunivesithi yeQueensland yeFakhalthi yezoNyango ibonelela ngoGqirha kwezonyango. Ukongeza, i-faculty ibonelela ngemfundo ekumgangatho ophezulu kwimpilo yoluntu kunye nakwisayensi yezinto eziphilayo.
Abafundi bezonyango kwi-UQ bafunda kwizikolo ezibini zophando, kwizikolo zonyango ezintathu, nakwiziko lesihlanu elisekwe esibhedlele nakumaziko.
IYunivesithi yaseQueensland yenzeka njengenye yezona yunivesithi zibalaseleyo kwezonyango eOstreliya zabafundi bamanye amazwe.
IYunivesithi yesizwe yaseOstreliya (ANUYiyunivesithi yophando yesizwe e-Canberra, e-Australia eyasekwa ngo-1946.
Inkqubo yoGqirha kwezeMpilo kunye noPhando kwi-ANU ilawulwa yiYunivesithi yaseKholeji yezeMpilo kunye nezoNyango. Le nkqubo yaziwa njenge I-Medicinae ac Chirurgiae Doctoranda, (MChD), sisiqinisekiso esandisiweyo se-AQF Level 9 esikhokelela kubhaliso lwaphambi kwexesha njengogqirha osemncinci.
I-MChD ixhasa imixholo emine enje ngezakhono zonyango, izakhono zeklinikhi, impilo yabemi, kunye nobuchwephesha kunye nobunkokeli. Le nkqubo
Ikholeji ye-ANU yezeMpilo kunye noNyango iza kuluhlu lweyona yunivesithi zibalaseleyo kwezonyango eOstreliya zabafundi bamanye amazwe.
IYunivesithi yaseAdelaide yiyunivesithi kawonkewonke eAdelaide, eMzantsi Ostreliya eyasekwa ngo-1874. Ineekhampasi ezine; ezintathu eMzantsi Australia (North Terrace, Roseworthy, kunye Waite) kunye enye Melbourne, Victoria.
UAdelaide ubonelela ngeBachelor of Medical Study / Doctor of Medicine. Ngale nkqubo, abafundi bezonyango bafumana ulwazi, ukuzithemba, kunye nezakhono ezifunekayo ukuze bagqwese kwicandelo lokhathalelo lwempilo.
Abafundi bafunda kwezonyango kwizakhiwo ezitsha zikarhulumente zeAdelaide zezeMpilo kunye nezeSayensi kubandakanya Isibhedlele iAdelaide, Isibhedlele saseLyell McEwin, isibhedlele iModbury, Isibhedlele iQueen Elizabeth, njlnjl Apha, basebenza ngokwamaqela amancinci ukusombulula iingxaki ezinxulumene nempilo nezifo. .
Inkqubo yezonyango yase-Adelaide ephezulu-notch yenza ukuba iziko libe lelona yunivesithi zibalaseleyo kwezonyango e-Australia zabafundi bamanye amazwe.
IYunivesithi yaseNtshona Koloni (UWAYiyunivesithi yophando yoluntu eNtshona Ostreliya eyasekwa ngo-1911.
Ugqirha wezoNyango we-UWA uvelisa oogqirha abazibophezele kwimpilo yomguli, yoluntu, olunoxanduva, kunye nolwenzululwazi. Inkqubo ijikeleze imixholo emithandathu engundoqo kubandakanya ubuGcisa, INkokeli, Ummeli, Ugqirha, Utitshala, kunye Umphengululi.
Kwelinye icala, isikolo sonyango saseyunivesithi kuphela kwesikolo sezonyango e-Australia ukuba nenkqubo ye-longitudinal yoPhuculo noPhuhliso (PDM). Apha, bonke abafundi bezonyango babelwe umcebisi weklinikhi oya kuthi abancede abafundi ukuba bakhule ebaleni ngalo lonke ixesha lenkqubo yabo.
Ukugxilwa kwe-UWA kuphando kunye nokuyila kwenza ukuba iziko libe lelinye leeyunivesithi eziphambili kwezonyango e-Australia zabafundi bamanye amazwe.
IYunivesithi yaseNewcastle (UON) yiyunivesithi yophando yoluntu e-Australia eyasekwa ngo-1965 ineekhampasi ezibandakanya iCallaghan, i-Ourimbah, iPort Macquarie, iSingapore, iNewcastle CBD kunye neSydney CBD.
IYunivesithi yaseNewcastle yeSikolo sezoNyango kunye neMpilo yoLuntu inikezela ngeNkqubo yoNyango oluHlanganisiweyo kubandakanya iBachelor yezoNyango lwezoNyango kunye noGqirha kwezonyango (MD-JMP). Le nkqubo yenziwe ngekharityhulam emanyanisiweyo esekwe kwingxaki kunye nokuvezwa kweklinikhi kwangoko kunye nokuthatha inxaxheba koluntu.
Abafundi bezonyango kwi-UON bafumana amava ezonyango kwi-Hunter Medical Research Institute (HMRI). Kwisithuba seenyanga ezine emva kokuphumelela, abafundi bezonyango bafumana umsebenzi. Oku kwenza i-UON yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo kwezonyango eOstreliya zabafundi bamanye amazwe.
IYunivesithi yaseDeakin yiyunivesithi kawonkewonke eVictoria, e-Australia eyasekwa kwi-1974.
Isikolo seYunivesithi yezoNyango sikwiKhampasi yeWaurn Ponds eGeelong, eVictoria, e-Australia. Isikolo sikaDeakin sezoNyango sinikezela ngeminyaka emine, ukungena kwisidanga, kugqirha isidanga (MD) isidanga.
Okwangoku, iDeakin University's School of Medicine ibonelela ngeenkqubo zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala kubandakanya i-Optometry, iMifanekiso yoNyango, iMpilo yezoLimo kunye noNyango, iMpilo kunye nezoNyango lwezoNyango, i-MBA (uLawulo lwezeMpilo), kunye ne-Master of Philosophy.
KwiYunivesithi yaseDeakin, abafundi bezonyango kunye ne-optometry bafunda kwaye basebenze phantsi kweliso loogqirha, oogqirha, kunye nabanye abaqeqeshi bezonyango kwiindawo zokubeka unyango.
IYunivesithi yaseCretin yiyunivesithi yophando yoluntu ePerth, eNtshona Ostreliya eyasekwa kwi1966.
Ngexesha lonyaka wokuqala wenkqubo yezonyango, abafundi bagxila kwisayensi yezinto eziphilayo kunye nakwisayensi yezonyango. Bafunda kwakhona impilo yemveli, impilo yabemi, kunye neengcinga zophuhliso lobungcali.
Kunyaka wesibini nowesithathu, abafundi bachitha ixesha labo kwizifundo ezinzulu ngakumbi kubume bemisebenzi yomzimba womntu kwezempilo nakwizifo. Bakuba bengenile kunyaka wesine nowokugqibela, abafundi bashiya ikhampasi yaseCurtis baya kuseto lweklinikhi apho bafunda kwaye basebenza phantsi kweliso loogqirha.
Inkqubo yezonyango yase-Curtis yeYunivesithi ekumgangatho wehlabathi yenza ukuba iziko libe lelona yunivesithi zibalaseleyo kwezonyango e-Australia zabafundi bamanye amazwe.
IYunivesithi yaseFlinders yiyunivesithi yoluntu eAdelaide, eMzantsi Ostreliya eyasekwa kwi1966.
Ikhampasi yaseyunivesithi ikwiAdelaide yangaphakathi yedolophu eseBedford Park. Ikwanazo neekhampasi eVictoria Square naseTonsley kunye namaziko okufundisa kwingingqi yoMzantsi Australia, kumazantsi mpuma eVictoria, nakwiNorthern Territory.
Eli ziko libonakala njengenye yezona yunivesithi zibalaseleyo kwezonyango eOstreliya zabafundi bamanye amazwe ngokubonelela ngeyona nani liphezulu lomsebenzi wexesha elizeleyo kwezonyango. Ukongeza, i-Flinders iyaqhubeka nokuba phambili kwizinto ezintsha ekufundiseni nasekuphandeni kwicandelo lezonyango.
Inkqubo ye-MBBS kwiYunivesithi yaseFlinders ibonelelwa yiKholeji yezoNyango kunye neMpilo yoLuntu. IYunivesithi yaseFlinders ikwabonelela ngeendawo ezimbini ngaphakathi kwinqanaba lezonyango kubandakanya neZindawo eziXhasiweyo zeCommonwewe eziXhaswayo kunye neeNdawo eziDibeneyo zeCommonweed ezixhaswayo.
IYunivesithi yaseJames Cook (JCU) yiyunivesithi yoluntu eMantla eQueensland, e-Australia eyasekwa ngo-1961.
IYunivesithi yaseKholeji yoNyango kunye noDentistry inikezela abafundi uqeqesho olukumgangatho wehlabathi kunyango, kugqirha wamazinyo nakwikhemesti. Ikwalikhaya kuphando oludumileyo kwihlabathi liphela.
Inkqubo yeJCU yeBachelor of Medicine, iBachelor of Surgery (MBBS) inkqubo yoqeqesho lwabafundi bezonyango ukuba babe ngoogqirha abanezakhono eziphezulu abanesizathu sokusindisa ubomi kunye nokugqwesa ebaleni. Kuthatha iminyaka emithandathu ukugqiba le nkqubo.
Iiyunivesithi zaseOstreliya ngaphandle kweNtlawulo yokufaka isicelo sabaFundi beZizwe
Iindlela ezi-5 ezimangalisayo zokufumana i-Ph.D. E-Australia ngeScholarship
Scholarships zaseAustralia Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo
Post Previous:Iikholeji ezi-15 eziphambili zikaRhulumente eCanada
Okulandelayo Post:Izikolo ezili-18 ezilula zamazinyo zokungena | I-US, UK, Canada